Lalana mampandroso ny lalàna | NewsMada
Fifampifehezana eo anivon’ny fiarahamonina ny lalàna: fandrarana izay tsy azo atao, fanerena amin’izay tsy maintsy atao… Mamaritra ny zo sy adidin’ny tsirairay. Miara-dalana izay fa tsy mandeha ila na mandringa: misy te hanana sy hisitraka ny zony fa tsy te hanao adidy, na manao adidy fa tsy manana na tsy misitraka ny zony. Ny lalàna dia lalàna. Mafy ny lalàna, saingy izay ny lalàna. Tsy misy olona heverina ho tsy mahalala lalàna. Mba tsy ho fialana ny hoe tsy mahalala lalàna amin’ny fandikana izany.
Amin’ny tany repoblikanina misy fisaraham-pahefana, eo ny fahefana mpanao lalàna. Ireo solo vavan’ny vahoaka voafidy izany. Ankoatra izay, misy karazany ny didy aman-dalàna, manana ny ambaratongany avy: lalàmpanorenana, lalàna fehizoro… Eo koa ny hoe didy hitsivolana, didim-panjakana, didim-pitondrana. Inona no itanisana izany rehetra izany? Misy, rey olona, ny mitady amorona lalàna ifampifehezana amin’ny hafa eo amin’ny sehatra misy azy. Hafa ny hoe dina ifampifehezan’ny mpiray dina.
Ny fahamaroana isa no enti-miady amin’ireo mitady hamorona lalàna ho azy na hanao jadona amin’izany. Amin’izay heveriny ho marina ho azy, mahasoa azy, mety aminy… Tsy heverina ny hafa? Rehefa indray mamo lava, ohatra, ny iray tanàna, izay tsy misotro no tsaraina hoe adala. Na ny hadalan’ny maro no hoe fahendrena? Na izay fomba amam-panao, hita izao fa tsy mahasoa ny hafa na mety mahatsara ny tena aza: tadiavin’ny sasany havadika ho lalàna, tsy eo amin’izy samy izy ihany fa ho an’ny hafa koa.
An-dalana amin’ny fampiharan-dalàna izao ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Misy ny tsy mahazaka, tsy te hofehezina, te hametraka ny lalàna ho azy… Izay no anton-dresaka eto. Rehefa maromaro na hoe maro an’isa ny minia manohitra lalàna na mamorona lalàna ho azy, heverina na havadika ho marina, ekena, mahasoa… ? Tsy mbola mety ho kolontsaina ny fanarahan-dalàna. Tsy moramora na vetivety ny fampanarahan-dalàna heverina ho zava-baovao? Mila heverina izany raha tena te handroso…